24 “Gịnị mere na Onye Pụrụ Ime Ihe Niile ekwughị oge ọ ga-ekpe ikpe,+Gịnịkwa mere na ndị maara ya ahụghị ụbọchị ya?+ 2 E nwere ndị na-ewela ihe e ji kpaa ókè ala azụ;+Ha akpụrụwo ìgwè ewu na atụrụ n’ike, ka ha wee zụọ ha. 3 Ha na-achụfu ọbụna oké ịnyịnya ibu nke ụmụ na-enweghị nna;Ha na-ejichi oké ehi nke nwaanyị di ya nwụrụ dị ka ihe ibé.+ 4 Ha na-enupụ ndị ogbenye n’ụzọ;+N’otu mgbe ahụ, ndị nọ n’ahụhụ n’ụwa ezowokwa. 5 Lee! Dị ka ịnyịnya ọhịa+ ndị nọ n’ala ịkpa,Ha agawo n’ihu n’ọrụ ha, na-achọ ihe oriri.Ọzara na-enye onye nke ọ bụla nri ụmụ ya ga-eri. 6 N’ọhịa ka ha si eweta nri ọ na-ata,Ha na-ebukọrọkwa ihe dị n’ubi vaịn onye ajọ omume ngwa ngwa. 7 Ha na-agba ọtọ ehi ụra abalị n’eyighị uwe,+N’ekpuchighịkwa onwe ha ihe ọ bụla n’oge oyi.+ 8 Oké mmiri ozuzo nke si n’ugwu na-ede ha,Ha na-amakụkwa oké nkume n’ihi na ebe mgbaba adịghị.+ 9 Ha na-esepụ nwa na-enweghị nna ọnụ n’ara,+Ha na-ewerekwa ihe onye nọ n’ahụhụ yi n’ahụ́ ka ọ bụrụ ihe ibé.+ 10 Ha na-agba ọtọ ejegharị, n’eyighị uwe,N’agụụ, ha na-eburu oko ọka* ha ghọrọ.+ 11 N’ala ubi nke dị n’etiti mgbidi abụọ ka ha na-anọ n’ehihie;Ha na-azọchapụta mmanya, ma akpịrị na-akpọ ha nkụ.+ 12 Ude ndị na-anwụ anwụ na-asụ si n’obodo na-adapụta,Mkpụrụ obi nke ndị e merụrụ ahụ́ nke ukwuu na-eti mkpu enyemaka;+Chineke adịghịkwa ewere ya dị ka ihe na-ekwesịghị ekwesị.+ 13 Ha so ná ndị na-enupụrụ ìhè isi;+Ha amaghịkwa ụzọ ya,Ha anọgideghịkwa n’okporo ụzọ ya. 14 Ogbu mmadụ na-ebili n’ehihie,Ọ na-egbukwa onye nọ n’ahụhụ na ogbenye;+N’abalị kwa, ọ na-aghọ onye ohi.+ 15 Anya onye na-akwa iko+ anọwo na-echere mgbe chi jiri,+Na-asị, ‘Ọ dịghị anya ga-ahụ m!’+Ọ na-ekpuchikwa ihu ya. 16 Onye ohi egwupuwo ụlọ n’ọchịchịrị;N’ehihie, ndị ohi na-akpọchigide onwe ha ụzọ.Ha amaghịkwa ihe bụ́ ìhè ehihie.+ 17 N’ihi na ụtụtụ na oké ọchịchịrị+ bụụrụ ha otu ihe,N’ihi na ha ma ihe bụ́ ụjọ mberede nke a na-atụ n’oké ọchịchịrị. 18 Mmiri na-ebupụ ya ngwa ngwa.A ga-abụ ibé ala ha ọnụ n’ụwa.+Ọ gaghị aga n’ụzọ ubi vaịn ya. 19 Oké ọkọchị na okpomọkụ na-eme ka mmiri snoo taa;Otú ahụ ka Shiol na-eme ndị mehierenụ!+ 20 Akpa nwa ga-echefu ya, ikpuru ga-amịcha ya,+A gakwaghị echeta ya.+A ga-agbajikwa ajọ omume dị nnọọ ka osisi.+ 21 Ya na nwaanyị aga nke na-adịghị amụ nwa na-emekọ ihe,Ya na nwaanyị di ya nwụrụ,+ bụ́ onye ọ na-adịghị emere ihe ọma, na-emekọkwa ihe. 22 Ọ ga-ejikwa ike ya dọkpụrụ ndị dị ike;Ọ ga-ebili ọtọ ma ọ gaghị eji ndụ ya n’aka. 23 Chineke ga-eme ka o nwee obi ike,+ ka o wee kwado onwe ya;Anya Chineke ga-adị n’ụzọ ha.+ 24 Ha na-adị elu ruo nwa oge, nke ha agaa,+E mewokwa ka ha dị ala;+ a na-ebipụ ha dị ka onye ọ bụla ọzọ,A na-egbujipụkwa ha dị ka oko ọka. 25 Ugbu a, ònye ga-eme m onye ụgha,Ma ọ bụ mee ka okwu m ghọọ ihe efu?”